Arduino MKR WAN 1300 na Arduino MKR GSM 1400, bọọdụ ọhụrụ maka IoT sitere na Arduino Project | Akụrụngwa n'efu
Arduino MKR WAN 1300 na Arduino MKR GSM 1400, bọọdụ ọhụrụ maka IoT sitere na Arduino Project
N’ụbọchị ndị a, ihe kachasị mkpa Onye Mere Ihe n’afọ mere na New York. Ihe ngosi ebe ndi oru ngo ama ama ama ama amaala oru ha na ngwa ohuru ha. Arduino abanyekwala na ngosipụta a ma gosipụta mbadamba ọhụụ abụọ nke ezinụlọ Arduino.
A maara efere ndị a dị ka Arduino MKR WAN 1300 na Arduino MKR GSM 1400. Obere mbadamba abụọ na-elekwasị anya na ụwa IoT na nke ahụ ga-enyere onye ọrụ aka ịme ezigbo ọrụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ isonye na Internetntanetị nke Ihe.
MKR WAN 1300 osisi nwere nkwukọrịta ikuku na-agbakwunye na nhazi okirikiri MKR osisi efu, nke ahụ bụ, anyị ga-enwe nkwado maka ngwa 32-bit. Efere atụmatụ 256KB nke nchekwa nchekwa na 32KB SRAM. Ọ nwere ike na-agba ọsọ na ike nke batrị abụọ 1,5V na ha niile nha 67,64 x 25mm. Site na inwe nkwukọrịta ikuku, ngwaọrụ ị jikọọ ga-enwe nhọrọ nke ịkọrọ thentanetị.
Boardlọ ọrụ Arduino MKR GSM 1400 bụ nhọrọ nke na-agbaso ụzọ nke ọtụtụ ọrụ IoT. Efere a, dị ka aha aha ya na-egosi, nwere usoro GSM nke ga-ekwe ka njikọ dịpụrụ adịpụ na-enweghị mkpa maka rawụta, naanị site na iji kaadị ekwentị mkpanaaka. Nhazi nke ihe ndị ọzọ dị na bọọdụ ahụ yiri nke MKR Zero Board, mana oriri ike abụghị otu na MKR WAN 1300 board, ịdị elu. Efere MKR GSM 1400 chọrọ opekata mpe batrị 3.7V LiPo iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọganihu a sitere na modul GSM nke mbadamba nwere, mana nke a apụtaghị mmụba na nha, inwe otu nha dịka mbadamba MKR WAN 1300.
A ga - echekwa ụdị ọhụrụ abụọ nke mbadamba Arduino maka ịzụta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Arduino. Boardlọ ọrụ MKR WAN 1300 nwere ọnụahịa nke euro 35 ebe osisi MKR GSM 1400 nwere ọnụahịa nke euro 59,90. Ọnụ ego abụọ ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche mbadamba efere na nnukwu obodo nke ọrụ a nwere. Yabụ na ọ dị ka Arduino ka na-alụ ọgụ maka ịmepụta gburugburu ebe obibi n'efu maka IoT. Otú ọ dị Ogwe ndị a ọ ga-enwe otu ihe ịga nke ọma dị ka Arduino Yún? Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Arduino MKR WAN 1300 na Arduino MKR GSM 1400, bọọdụ ọhụrụ maka IoT sitere na Arduino Project
NanoDimension na-enye ọhụụ ọhụrụ DragonFly 2020 Pro
Drones nwere ike ịkwaga ugbu a n'ọchịchịrị n'ihi iji retinas artificial